Bembule ofata izinqe abafana abathi "bebedlwengulwa" - Ilanga News
Home Izindaba Bembule ofata izinqe abafana abathi “bebedlwengulwa”
Bembule ofata izinqe abafana abathi “bebedlwengulwa”
Isigungu sithi cishe u-95% wofata uphila impilo yobunkonkoni
AYAVEVA amalungu amaRoma Akhatholika esifundabhishobhi saseMariannhill, eThekwini ngofata baleli bandla abasolwa ngokujola nabafana abafundela ubupriste.
La malungu asesigungwini esiphezulu i-Deanery Council saleli bandla, eMariannhill acele ukuba amagama awo angadalulwa ukugwema amazinyo abushelelezi athi cishe u-95% wofata uphila impilo yobunkonkoni, kanti abanye babo sebehluleka ngisho nawukubufihla njengoba kukhona abahlala nabafana ezimishini, ababawashelayo, babaphekele.
Athi sekukaningi ebikelwa ngabefundisi abaphila le mpilo ephambene nenqubo yebandla kodwa banganaki. Atshele ILANGA ukuthi okubasuse phansi, wukuthola izincwadi zabafana ababili abebeyizikhonzi ezimishini ezahlukene, bekhala ngokunukubezwa ngokocansi ngabapriste kusukela beneminyaka ewu-17.
Omunye wabesilisa – ILANGA eliyibonile incwadi yakhe futhi inegama lakhe uthi ufata, esingeke simdalule ngenxa yezizathu zomthetho, ubeze amlande ngisho ezihlalele kubo amyise emishini afike amtshele ukuthi makakhothe isitho sakhe sangasese ngaphambi kokuba amnukubeze.
“Ufata … waqala ukungigila lo mkhuba ngo-2011 emkhosini waseKhevela likaSt Anna. Waya nami ehlathini wangithinta isitho sami sangasese, wathi nami mangithinte esakhe maqede wanginukubeza. Wathi uma eseqedile wangisabisa ngokuthi uma ngike ngakhuluma uzongibulala angiphonse esizibeni ngingatholwa muntu.
“Ngathula ngaleso sikhathi ngoba ngangifuna ukufundela ubupriste, engisabisa ngokuthi uma ngingayenzi into ayishoyo ngeke ngiye e-seminary lapho kufundelwa khona ubupriste.
“Wathi uma kwenzekile nga-ngena, ngeke ngiqede, uzotshela abafundisi abangabangani bakhe okuyibo abafundisayo, bangixoshe,” kusho lona wesilisa.
Uthi selokhu wahlukumezeka ngale ndlela, impilo yakhe kayiphindanga yafana njengoba engasakwazi ngisho ukuba nobudlwelwano obuqondile futhi esehlala ngokuzizonda.
“Impilo yami inzima, ngifana nomuntu owabulwa ephila. Besengesaba ngisho ukuhamba edolobheni, ngisaba ukuthi mhlawumbe uyangibona, uzongithatha angibulale.
“Udaba ngize ngalubika ebandleni ngonyaka odlule, ngabhala incwadi ngayifaka esigungwini sebandla njengoba baze baqala kulo nyaka ukungibuza ngayo. Ngisho nasekhaya akwaziwa ukuthi ngake ngavelelwa yile nkinga,” kusho lona wesilisa obekucaca ukuthi akathandi ukukhuluma ngalolu daba.
Ilungu lesigungu lithi encwadini yesibili ebhalwe ngowesilisa, naye esiligodlile igama lakhe, ubabala baze babebathathu ofata abamnukubezile. Uthi waze washiya ukufundela ubupriste ngoba esekhathele wukugilwa lo mkhuba.
“Umfana uthi emuva kwalo-kho, bamsabisa nangokumbulala uma edalula la manyala. Umbuzo esizibuza wona uthi zingaki izingane abazihlukumezile kodwa zangabi naso isibindi sokukhuluma,” kusho leli lungu.
Lithi lab’ ofata babaheha ngempilo ewubukhazikhazi abafanyana, babathengele omakhalekhukhwini ababizayo ne-data. Litshele ILANGA ukuthi kunezingane ezihamba ngezimoto eziphambili ezifundela ubufundisi, ziphatha omakhalekhukhwini bakanokusho, okusolwa ukuthi yibo lab’ ofata abazithengelayo.
Kuthiwa kunomunye usomabhizinisi waseShowe ongungqondongqondo wale mikhuba, ofata abambiza ngomalume ngoba akukho angabakhithizeli khona.
“Kunemizi echithekile ngenxa yale mikhuba eyenziwa ngabapriste. Kunomunye wesifazane owake wasibuza inkinga, ethi kusuke sekwenzenjani uma ufata esehlala nendoda yakhe kuze kushaye u-12 ebusuku.
“Kwaba yinto enganakwa leyo, kodwa manje sesiyabona ukuthi kusho ukuthi nayo yayisingene kulolu gibe. Lifile ibandla lethu ngenxa yalaba befundisi abangena kungafanele ebupristeni.
“Umbhishobhi siyasola ukuthi kukhona akwaziyo ngalaba ba-priste ngoba uhlale ekhuza ukuthi mabahlukane nokuba ngabangani babafana abancane. Sinxusa namanye amakholwa anezingane ezibe yizisulu aphu-mele obala ukuze siqede lesi sihlava esihlasela ibandla lethu,” kusho leli lungu lesigungu.
Okhulumela ibandla lamaRoma aKhatholika, uFata Vusi Sokhela, uthe akukho osekuke kwabikwa, ngokusemthethweni wathi uma amakholwa esebikile, kubona udaba bayolulandela ngokwemigudu yebandla efanele.
Previous articleUMiddendorp unukelwa yisicoco seligi
Next articleIthemba kwiDowns kudliwa iChiefs